I-Casa Brisas YANAMHLANJE yabantu abayi-14 - I-Airbnb
I-Casa Brisas YANAMHLANJE yabantu abayi-14
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguGaby
I-Villa San Gabriel yindawo efanelekileyo yokuchitha iholide eAcapulco, kunye neyona ndawo intle ye-Bay. Ikwabonelela ngazo zonke izinto ezinokusetyenziswa ukuze ibe yiholide engasoze ilibaleke kuba le ndlu inazo zonke izinto ezinokusetyenziswa nabantu abanobubele kakhulu
I-Villa San Gabriel iyibona ngendlela ekhethekileyo iBay of Acapulco, iyindawo eneendawo ezivulekileyo kwaye iindwendwe ezithe gabalala zonwabele ukuba zodwa. Ixhotyiswe ngokupheleleyo nge-satellite TV, i-Wi-Fi kuyo yonke indlu kunye ne-Smart TV. Ineendawo zokupaka zabucala eziyi-4. Ukongezelela, kubantwana kukho igumbi labantwana, eline-Smart TV kunye nemidlalo yabantwana abaphakathi kweminyaka eyi-2 ukuya kweyi-8. Onke amagumbi aneekhethini zombane, ibe onke amagumbi aneTV.
Ukuze wonwabele iiholide zakho ngokupheleleyo, sinemidlalo yebhodi efana ne-domino, i-Jenga, ENYE kunye nokunye.
Indawo ekhethekileyo kakhulu yeAcapulco
I-Villa San Gabriel ikufutshane kakhulu neendwendwe ngenxa yezixhobo zayo onokulungiselela ukuthenga ukutya neziselo (iindleko ezongezelelweyo) ngaphambi kokungena (cela kwiiyure eziyi-48 ngaphambi). Kumnandi ukungena kwi-Villa San Gabriel kwaye uyazi ukuba ukususela ekufikeni kwetafile iza kulunga kunye nokutya okulungiselelwe ngokutsho kwemenyu ekhethwe phakathi kondwendwe kunye neCook
I-Villa San Gabriel ikufutshane kakhulu neendwendwe ngenxa yezixhobo zayo onokulungiselela ukuthenga ukutya neziselo (iindleko ezongezelelweyo) ngaphambi kokungena (cela kwiiyure e…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Acapulco de Juárez